WordPress: Raadinta Raadinta Goobta ee Google Analytics
Axad, Nofeembar, 4, 2007 Wednesday, April 1, 2015 Douglas Karr
Google Analytics wuxuu leeyahay muuqaal fiican, awooda lagu kormeero baaritaanada gudaha ee bartaada. Haddii aad socotid blog WordPress, waxaa jira hab fudud oo loo maro dejiso Raadinta Goobta Google Analytics:
Xulo goobtaada Google Analytics oo guji Edit.
U gudub aragtida aad rabto inaad dejiso Raadinta Goobta.
Guji Arag Dejinta.
Hoostiisa Dejinta Raadinta Goobta, u dejiso Raadinta Raadinta Goobta ee ON.
Meesha Su'aalaha Halbeegga ku qor, geli ereyga ama ereyada tilmaamaya cabbirka weydiinta gudaha, sida "ereyga, raadinta, weydiinta". Mararka qaar eraygu waa uun xaraf, sida "s" ama "q". (WordPress waa "s") Gali ilaa shan xuduudaha, oo lagu kala gooyo calaamadaha.
Xulo haddii aad rabto iyo inkale Google Analytics si aad uga saarto cabirka cabbirka URL-kaaga. Tani waxay kala-baxaysaa oo keliya cabbirada aad adigu bixisay, mana aha wax xaddidyo kale oo isla URL ah.
Xulo haddii aad isticmaasho ama aadan isticmaalin qaybaha, sida menusyada hoos-u-dhaca si aad u nadiifiso goob-raadinta.
Tags: raadinta goobta falanqaynta googleraadinta bogga googlegoobta raadintabaaritaanka wordpress
Adhigu wuxuu u nuuganyahay aragti ahaan
Waxaan kaqeybgalayaa Shirka TechPoint Jimcaha
Nov 5, 2007 at 2: 31 AM
Waad ku mahadsantahay caarada, kaliya waa la hirgaliyay!
Nov 5, 2007 saacadu markay tahay 12:44 PM
Mid wanaagsan, Doug! Ma aanan ogeyn in tan la heli karo.
Agoosto 11, 2010 saacaddu markay ahayd 12:05 PM
Waad ku mahadsan tahay Talooyinka! Waxaan rakibay tan maalmo kahor mana hubin baaritaanka baaritaanka waxaana la yaabay sababta aysan weli u soo werin. Labada arimoodba waad kahadashay!
Oktoobar 8, 2011 at 7:57 PM
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, sidaas ayaan sameeyay! 🙂
Waxa kale oo jira SiteMeter ah plugin, waxaad u isticmaali kartaa si aad u aragto waxa keyword iyo inta jeer ee la baaray on your blog